Why is “Waist circumference" important? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Waist circumference ဘာလို့ အရေးကွီးလဲ?
Waist circumference ကို မွနျမာလို တိုကျရိုကျဘာသာပွနျရရငျတော့ ခါးရဲ့ လုံးပတျအဝနျးပေါ့။ အပျခြုပျပညာလိုဆိုရငျတော့ ခါးအကယျြလို့ ချေါနိုငျမယျထငျပါတယျ။
“Waist circumference ဘာကွောငျ့ အရေးကွီးသလဲ”
Waist circumference က ကိုယျတှငျးကလီစာတှမှော ဖုံးနတေဲ့ အဆီတှကေို သှယျဝိုကျသောနညျးနဲ့ ဖျောပွပါတယျ။
ကြှနျမတို့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီပိုတှဟော ဝမျးဗိုကျ၊ တငျပါးနဲ့ ပေါငျတှမှော မြားသောအားဖွငျ့ စုလရှေိ့ပါတယျ။ ဆေးပညာကတော့ အဆီဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာထကျ ဘယျနရောမှာ ရှိတယျဆိုတာက ပိုအရေးကွီးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီစုတဲ့ နရောတှကေို upper body/android/male type နဲ့ lower body/gynoid/female type ဆိုပွီး အမြိုးအစား (2) မြိုး ခှဲခွားထားပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အပျေါပိုငျး အထူးသဖွငျ့ ဝမျးဗိုကျမှာ အဆီစုဝေးတာကို android type လို့ချေါပွီး အဝလှနျတဲ့ အမြိုးသားတှမှော တှရေ့မြားပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးတှဖွေဈတဲ့ တငျပါးနဲ့ ပေါငျတှမှော အဆီစုဝေးတာကိုတော့ gynoid type လို့ချေါပွီး အဝလှနျတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော တှရေ့ပါတယျ။ ပညာရပျဆိုငျရာ လလေ့ာမှုတှအေရ ဆီးခြိုရောဂါ၊ သှေးတိုးရောဂါ၊ သှေးတှငျးအဆီဓါတျမြားတာနဲ့ လဖွေတျတာတှဟော ပထမအမြိုးအစားဖွဈတဲ့ android obesity နဲ့ ဆကျစပျနတော တှရေ့ပါတယျ။
မိမိရဲ့ BMI ဟာ ပုံမှနျဖွဈနရေငျတောငျမှ ဝမျးဗိုကျမှာ (တဈနညျးအားဖွငျ့ ကိုယျတှငျးကလီစာတှမှော) အဆီတှမြေားနရေငျ ဒါဟာ အန်တရာယျရှိတဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျမတို့ဟာ ဝမျးဗိုကျမှာ အဆီစုဝေးမှု အခွအေနကေို သိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါကို waist circumference ကနတေဈဆငျ့ သိနိုငျပါတယျ။
“Waist circumference ဘယျလိုတိုငျးမလဲ”
ခကျြရဲ့အထကျ4cm (စငျတီမီတာ) နရောကနေ ပကွေိုးနဲ့ တိုငျးတာက အလှယျဆုံးနညျးလမျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ သတိထားရမှာက တိုငျးတဲ့အခါ ပကွေိုးကို မလြော့မတငျး ရပွေငျညီအတိုငျးထားပွီး တိုငျးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အမြိုးသားတှကေ waist circumference လကျမ 40 အောကျရှိသငျ့ပွီး အမြိုးသမီးတှကေတော့ 35 လကျမအောကျ ရှိသငျ့ပါတယျ။
အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ waist circumference ဟာ ဆီးခြိုရောဂါ၊ သှေးတိုးရောဂါ၊ သှေးတှငျးအဆီဓါတျမြားတာ၊ လဖွေတျတာတှနေဲ့ ဆကျစပျနတောကွောငျ့ waist circumference လကျမ 40 အထကျ အမြိုးသားတှနေဲ့ 35 လကျမအထကျ အမြိုးသမီးတှကေို တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျ/ပညာရှငျတှနေဲ့ တိုငျပငျကွဖို့ အကွံပေးလိုပါတယျ။
(မှတျခကျြ။ ။ အထကျပါ ဖျောပွခကျြသညျ အရပျ5ပေ အောကျ ရှိသူမြားအတှကျ အကြုံးမဝငျပါ။)
“Waist circumference ၏ အားသာခကျြနှငျ့ အားနညျးခကျြမြား”
တိုငျးတာရ လှယျကူရိုးရှငျးတာကတော့ သူ့ရဲ့ အားသာခကျြဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ BMI 35 kg/m2 နဲ့ အထကျ ရှိတဲ့သူတှမှောတော့ တိကတြဲ့အဖွေ သိပျမပေးနိုငျတဲ့အတှကျ အဲ့လိုလူတှမှောတော့ waist circumference ကို တိုငျးတာတာဟာ အကြိုးမရှိနိုငျပါဘူး။
Waist circumference ဘာလို့ အရေးကြီးလဲ?
Waist circumference ကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ ခါးရဲ့ လုံးပတ်အ၀န်းပေါ့။ အပ်ချုပ်ပညာလိုဆိုရင်တော့ ခါးအကျယ်လို့ ခေါ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
“Waist circumference ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ”
Waist circumference က ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေမှာ ဖုံးနေတဲ့ အဆီတွေကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုတွေဟာ ၀မ်းဗိုက်၊ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်တွေမှာ များသောအားဖြင့် စုလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးပညာကတော့ အဆီဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာထက် ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ်ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီစုတဲ့ နေရာတွေကို upper body/android/male type နဲ့ lower body/gynoid/female type ဆိုပြီး အမျိုးအစား (2) မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်း အထူးသဖြင့် ၀မ်းဗိုက်မှာ အဆီစုဝေးတာကို android type လို့ခေါ်ပြီး အ၀လွန်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်တွေမှာ အဆီစုဝေးတာကိုတော့ gynoid type လို့ခေါ်ပြီး အ၀လွန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေအရ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များတာနဲ့ လေဖြတ်တာတွေဟာ ပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ android obesity နဲ့ ဆက်စပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မိမိရဲ့ BMI ဟာ ပုံမှန်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ၀မ်းဗိုက်မှာ (တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေမှာ) အဆီတွေများနေရင် ဒါဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ဟာ ၀မ်းဗိုက်မှာ အဆီစုဝေးမှု အခြေအနေကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို waist circumference ကနေတစ်ဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။
“Waist circumference ဘယ်လိုတိုင်းမလဲ”
ချက်ရဲ့အထက်4cm (စင်တီမီတာ) နေရာကနေ ပေကြိုးနဲ့ တိုင်းတာက အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သတိထားရမှာက တိုင်းတဲ့အခါ ပေကြိုးကို မလျော့မတင်း ရေပြင်ညီအတိုင်းထားပြီး တိုင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေက waist circumference လက်မ 40 အောက်ရှိသင့်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကတော့ 35 လက်မအောက် ရှိသင့်ပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ waist circumference ဟာ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များတာ၊ လေဖြတ်တာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် waist circumference လက်မ 40 အထက် အမျိုးသားတွေနဲ့ 35 လက်မအထက် အမျိုးသမီးတွေကို တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်/ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါ ဖော်ပြချက်သည် အရပ်5ပေ အောက် ရှိသူများအတွက် အကျုံးမ၀င်ပါ။)
“Waist circumference ၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များ”
တိုင်းတာရ လွယ်ကူရိုးရှင်းတာကတော့ သူ့ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် BMI 35 kg/m2 နဲ့ အထက် ရှိတဲ့သူတွေမှာတော့ တိကျတဲ့အဖြေ သိပ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် အဲ့လိုလူတွေမှာတော့ waist circumference ကို တိုင်းတာတာဟာ အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။